Dowladdu waa in ay xil weyn iska saartaa daryeelka caafimaadka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Isbitaalka weyn ee jaamacadda Norrland oo ku yaal magaalada Umeå. Sawirle: Lillemor Strömberg/SR.
Dowladdu waa in ay xil weyn iska saartaa daryeelka caafimaadka
La daabacay onsdag 22 januari 2014 kl 15.55
Wasiirka arrimaha bulshada Göran Hägglund ayaa sheegay in loo baahan yahay in dowladdu xil weyn iska saarto arrimaha la xiriira daryeelka caafimaadka si xal loogu helo dhibaatooyinka sugitaanka daryeel caafimaad ee waqtiga dheer qaata. Sidaasna waxaa soo werisey idaacadda telefishanka ee SVT.
Telefishanka SVT ayaa baaritaan ku haya waqtiyada dheer oo la sugo goobaha kansarka oo khatar ku ah nafta dadka bukaanka.
Göran Hägglund wuxuu doonayaa in ay dowladdu xil weyn iska saarto daryeelka caafimaadka iyo in la baabi’iyo maamulka gobolada ee qaabbilsan gargaarka bulshada ama gobolada waaweyn oo maal iyo muruqba meel la isugu geeyo.
Dhanka kale, afhayeenka xisbiga Socialdemokratera u qaabbilsan daryeelka caafimaadka Lena Hallengren ayaa laga soo xigtey in ay dowladdu aad isugu shuqlisey sidii loo hirgelin lahaa habab kala duwan oo wax lagu hago. Waxayse Hägglund kaga duwan tahay in ay qabto daryeelka caafimaadku u baahan yahay maalgelin dheeraad ah. Waxay intaas raacisey in aan aqoomaha takhasuska ah hab wanaagsan la isugu xirin.
Baaritaan uu telefishanka SVT sameeyey ayaa lagu miijiyey caymisyada daryeelka caafimaadka ee gaarka loo la baxo ay soo kordheen oo ayba lix jibbaarmeen muddo lix sano ah. Haddii xisbiga Sooshiyaal-dimoqraadigu doorashada ku guuleysto wuxuu ku talajiraa in mamnuuc laga dhigo in goobaha daryeelka caafimaadka oo lagu maalgeliyo hantida bulshada ay safka daryeelka ku hormariyaan dadka ku jira caymiska ay gaarka ama birifaatka ah.